Heavy Equipment Operator အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် [Genvers] လုပ်ငန်းခွင်တွင်းအလုပ်အတွက်အလုပ်အကိုင်
"လေးလံသောပစ္စည်းကိရိယာများအော်ပရေတာ" အပါအ ၀ င်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိနေရာများတွင်အလုပ်နေရာများစာရင်း
အခြေအနေ setting ⇒ [အကြီးစားစက်ပစ္စည်းအော်ပရေတာ]
★အလုပ်ပမာဏသည်တည်ငြိမ်။ မပြတ်မတောက်! ★ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုများကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံလိမ့်မည်။ ★သင်၏ကျန်သက်တမ်း (Kenkokukyo သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း) အတွက်စိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ★ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်သောစိတ်ထားရှိသူများကိုအထူး ဦး စားပေးကုသပါမည်။ ★အားလပ်ရက်များယူပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရန်။မိသားစုရှိသူများအတွက်လုံခြုံသည်။ ★သင်၌ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအင်ဂျင်နီယာများသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများရှိသည့်အမျိုးသားအဆင့်အရည်အချင်းများရှိပါက ဦး စားပေးကုသမှု!
Hanekawa စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းစု, လီမိတက်
[ဖျက်သိမ်းရေးဝန်ထမ်းများနှင့်အကြီးစားစက်ယန္တရားစစ်ဆင်ရေးများစုဆောင်းမှု! ] သင်၏လက်၌အလုပ်ရရန်အခွင့်အလမ်း!အတွေ့အကြုံရှိသူများ ဦး စားပေးကုသမှု၊ အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်စနစ်ရှိသဖြင့်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသူများပင်လျှင်အဆင်ပြေပါသည်
★အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုလည်းကြိုဆိုကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားကြင်နာပြီးယဉ်ကျေးသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစမှပံ့ပိုးမှုပေးလိမ့်မည်။ ♪★အအေးခန်းနှင့်အဆောင်များပါ ၀ င်သောသီးသန့်ခန်းများ၊
(၁) လစဉ်ယန်း ၂၈၀,၀၀၀ မှယန်း ၃၂၀,၀၀၀ သို့လစဉ်လစာ (နေ့စဉ်ယန်း ၁၀,၀၀၀ မှ ၁၃၀၀၀ ယန်း) လစာလစာယန်း ၃၀၀၀၀၀ ယန်းယန်း ၄၀၀၀၀၀ ယန်းထက်ပိုသောလစာလစာလစာယန်း ၃၀၀၀၀၀ ယန်းမှ ၄၀၀၀၀၀ ယန်းထက်မက
Hanyu City, Saitama စီရင်စု
880 Kamiiwase, Hanyu City, Saitama စီရင်စု
Hanekawa စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းစု, လီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ
Tojuki Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
လူအများစုကတည်ဆောက်ခြင်းထက်ချိုးဖဲ့ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဟုထင်မြင်ကြသော်လည်းလက်တွေ့တွင်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့သောဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်ပုံသေသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ the site ပေါ် မူတည်၍ မည်သို့ချိုးဖျက်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်မည်။ - ကြင်နာတဲ့အလုပ်, ဒါကြောင့်ငါကဘယ်တော့မှငြီးငွေ့မ☆★
the ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်အတွက်တာ ၀ န်ယူမည့်လူငယ်များ (ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ) နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်အတွက် happy (မိဘများ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်) different စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပြောင်းလာသူများအတွက်အကြံဥာဏ်များလက်ခံခြင်း accept ★☆★အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်၊ မိုးရာသီဖြစ်သည်။ ပြီးတော့စောစောထတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်များများရှိပါတယ်။ ★☆★မည်သို့ပင်ဖြစ်စေစိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Kanto Kouki ကုမ္ပဏီလီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ
Kitashin Co. , Ltd.
★သင်သည်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး၌အလုပ်ပြောင်းနေပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ★ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ၀ န်ထမ်းသစ်များစုဆောင်းခြင်း★ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအခြေခံသည့်လူသစ်စုဆောင်းခြင်း!ယုံကြည်စိတ်ချရသောသမ္မတတစ် ဦး ။
အတွေ့အကြုံရှိသောသူ◆နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံမရှိသူ◆နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ ★☆★အရည်အချင်းများနှင့်စွမ်းရည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း ဦး စားပေးကုသမှု★☆★ your သင်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝအကဲဖြတ်။ ပြန်လည်ပေးမည် (...
အဓိကအားဖြင့် Saitama စီရင်စုနှင့်တိုကျို၏ဆင်ခြေဖုံးတစ်လျှောက်လုံး
Kitashin Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ